မောင်ရဲမင်း: May 2013
၁၀ ၊ ၁၁ ၊ ၁၂ အဖွဲ့ 
ကိုယ့်ရိုးသားမှုလေးနဲ့ ကိုယ် ဝတ်မှုန်ကူးကြတာပေါ့
ပရဟိတနှလုံးသားနဲ့အသက်လှလှရှုတတ်သူ
နှင်းခါးခြေရာထဲ အချစ်ကို ဝှက်ထားသူ
ညီမျှခြင်းတွေ ချထားတဲ့ မြို့မှာ
အမှန်တရားအတွက် ဘဝကို လောင်းကြေးထပ်ဝံ့သူ
ခု...လမ်း ၃၀ ပြည့်ခဲ့ပြီ
ပန်း ၃၀ ပွင့်ခဲ့ပြီ
မိုင်တိုင်အမှတ် ၃၀ ကနေ နောက်...ယုံကြည်ရာ ပန်းတိုင်ဆီ
၃၁ ဘုံက ကျွန်တော်တို့ ကို စောင့်ကြိုနေတယ်
Happy Birthday ပါ ကိုရဲ ။ ။
(မောင်ရဲမင်း အတွက် အမှတ်တရ မွေးနေ့ လက်ဆောင်)
Posted by mgyemin at 06:39 No comments:
သားကြီး။ မင်းနဲ့ ။ ငါနဲ့ ။ ပြီးတော့ ငါတို့ စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့ အမျှော် နဲ့ ။
အခု ပြောမယ့်စကားတွေမှာ မုသားမပါဘူး။
ဘာအနက်မှ ဝှက်မထားသလို ဘာအရောင်မှလည်းဆိုးမထားဘူး။ အဖြူသက်သက်။
မင်း တာဝန်ကျေပါတယ်ကွာ။ မင်းဟာ ခရမ်းပြာထက်လူလို။
ကဗျာကို ချစ်တယ်။ ကဗျာတွေရေးတယ်။အနုပညာ။
မင်းနဲ့ ငါဟာ ။ ဆေးလိပ်နဲ့ မီးခြစ်လို။
နှစ်ယောက်ပေါင်းမှ အဓိပ်ပါယ်ရှိတာ။မမေ့နဲ့ ။
မေ့မသွားနဲ့ ။မိဝေးဖဝေးမှာ လောကဓံကို ရဲရဲကြီးအံတုခဲ့ကြတာ။မေ့မသွားနဲ့ ။
အမည်ခံဦးသန့် လမ်းကို အမြတ်တနိုးသွားကြည့်ခဲ့ကြတာ။မေ့မသွားနဲ့ ။
ဟော ဟိုမှာ မြင်နေရတာ ငါတို့ မြန်မာသံရုံးလေးပေါ့ကွာ။မေ့မသွားနဲ့ ။
MY DIN ဖြစ်ဖြစ် DIN MYဖြစ်ဖြစ် သေချာတယ်။ အဲဒီရှေ့ မှာ လမ်းဟာ
ငါတို့ ကို ပြန်လျှောက်ခဲ့တယ်။ ငါတို့ ခေါင်းပေါ်ကတဝီဝီ မိုးပျံရထားကြီး။
မမေ့နဲ့သားကြီး။ဟိုမှာ သူဌေးငှာေးပးတဲ့ အဆောင်။ ငါ့ညီမလေးတစ်
ယောက် ဟိုအကောင်ကို ခေါ်တင်လာပြီ။မမေ့နဲ့ ။ မေ့မသွားနဲ့ ။ သားကြီး။
မေ့မသွားနဲ့ ။ဒါဟာ လျှက်တစ်ပြက် ရိုက်ချက်မဟုတ်ဘူး။ နှလုံးသားနဲ့ 
ရှိသေးတယ်။ငါတို့ မိုးကို ဒူးနဲ့ တိုက်ရဦးမယ်။ငါတို့လောကဓံကို မီးတင်ရှို့ ရဦးမယ်။
ငါတို့ အနာဂတ်ကို လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးရဦးမယ်။
ရှေ့ မှာ လင်းနေတဲ့ အလင်းတုတွေကို စနစ်တကျ ပြန်မှောင်ခိုင်းရဦးမယ်။
ငါတို့ ဒီလို အလင်းမှုန်မှုန်လေးရဖို့ ဘယ်လောက်အထိ မှောင်မိုက်ခဲ့ရတယ် ဆိုတာ
မင်း မေ့မသွားနဲ့။
Posted by mgyemin at 06:36 No comments:
" ရွာထဲ ရွာလည်နေတာ အခေါက်သုံးဆယ် "
နိုဝင်ဘာဟာ အရင်လိုမဟုတ်တော့တာ သေချာတယ် ဒါမှမဟုတ်
မသေချာဘူး ဒီလမ်းက ဘယ်ပန်းတိုင်ဆီဦးတည့်နေမလဲဆိုတာ
မိုင်တိုင် တစ် . . . နှစ် . . . သုံးဆယ် နောက် လေးဆယ် ငါးဆယ်ဆိုတာလဲ
မသေချာဘူး ထသွားထလာ ကံကြမ္မာထဲ အနည်ထိုင်နေတဲ့ ခင်ဗျား ။
တစ်ချိန်က နိုဝင်ဘာဟာ ခင်ဗျားအတွက် ချမ်းစိမ့်စိမ့်
အခု နိုဝင်ဘာဟာ ခင်ဗျားအတွက် လွမ်းစိမ့်စိမ့်
ဟိုတုန်းကဆိုတာကို မေ့ထားတတ်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားက
မနက်ဖြန်တွေကိုကျတော့ သတိရတိုင်းစိတ်လိုလက်ရ ဂရုစိုက်နေပြန်ရော
ဆောင်းတွင်းမရှိတဲ့ ရာသီဥတု ( အပျက်ကြီး ) ထဲမှာ
နိုဝင်ဘာဟာ ( ခင်ဗျားအတွက် ) နှင်းတွေဝေတယ် ။
( သူငယ်ချင်း ကိုရဲမင်း မွေးနေ့အမှတ်တရ )
Posted by mgyemin at 06:25 No comments:
သူပဲမွေးပြီး သူပဲမွှေးလို့မဆုံးတဲ့ ရနံ့လေး
မေမေခွံ့ကျွေးခဲ့တဲ့ မေတ္တာဟာ အချိုဆုံး အရာမှန်းသိရတော့
သားအပျော်ထဲ ပျော်ကျ သွားတော့တယ်
( ဒီမွေးနေ့မှ ရှေ့ဖြတ်သန်းရမယ့်နေ့တွေမှာ မွေးမိခင်ကိုကျေးဇူးဆပ်နိုင်တဲ့ သားကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေ )
မောင်ရဲမင်း အတွက် မွေးနေ့အမှတ်တရ (11 . 11 . 2012 ) 3:35 am
Posted by mgyemin at 06:21 No comments:
ခေတ်ကြီးရဲ့ မာလိန်မှုး (ဗီလိန်)
ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာကို ရွက်တိုက်လွှင့်ခဲ့တယ်
ဒီလို ..ခေတ်ခက်ဆစ်တွေ ဖွဲ့ဆိုရင်း
တွေး ………….. ဆွေး …………………
ကဗျာနဲ့အိမ်ထောင်ကျနေတယ် ။ ။
သူငယ်ချင်း လင်းလက်တာရာ မွေးနေ့ အမှတ်တရပါ ။
လင်းလက်တာရာ ရေးသားပြီးတဲ့ ကဗျာခေါင်းစဉ်များနဲ့ ပြန်လည် ဖွဲ့သီပါတယ် ။
Posted by mgyemin at 06:11 No comments:
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ၊ သွားရင်း လာရင်း သဘောကျလို့ ရိုက်ယူထားတာလေးပါ ။ မြို့လယ်ခေါင် bus stand တစ်ခုမှာ ၊ဘယ်လဂျီယံနိုင်ငံသားတစ်ဦး ဂစ်တာလွယ်ပြီး ဖျော်ဖြေမှု့လေး တစ်ခုပါ ။လူတွေက သူ့ရှေ့မှာ ချထားတဲ့ ဂစ်တာအိတ်ကလေးထဲကို ပိုက်ဆံတွေ ထည့်သွားကြတယ် ။ မြင်ကွင်းလေးက
သာမာန်ကြည့်မယ် ဆိုရင်တော့ လမ်းဘေးပိုက်ဆံရှာတယ်လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ကြမှာပါပဲ ။ကျွန်တော်က
တော့ တလေးတစား ခွင့်တောင်းပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့ပါတယ်။
Posted by mgyemin at 06:02 No comments:
ဟောဒီ့ ၂၀၁၃ မီး
မီးတွေ.. မီးတွေ ....မီးတွေ
Posted by mgyemin at 05:48 No comments:
Posted by mgyemin at 05:45 No comments:
ခင်ဗျားလည်း လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တာကိုး
နိုင်ငံခြားမှာ နေရတဲ့ ဒုက္ခတွေထဲမှာ နံနက်စာ ကောင်းကောင်း မစားရခြင်းလည်း ပါပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဆိုရင်တော့ နံနက်စာက အင်မတန် ပေါပါတယ်။ မုန့်ဟင်းခါး၊ အသုတ်၊ ပလာတာ၊ အီကြာကွေး၊ စမူဆာ၊ အကြော်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း ... ပြောရင်တော့ ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာတော့ ဒီလို အစားအစာတွေက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်မှ စားရမှာ ဆိုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ မလုပ်စား ဖြစ်ပါဘူး။ နံနက်ဆို အလုပ်ဆင်းဖို့တောင် အနိုင်နိုင်ဆိုတော့ ပေါင်မုန့်နဲ့၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ် စားရဖို့ အတွက်တောင် အချိန် မနည်း ပေးရပါတယ်။ သူတို့ နံနက် စာတွေကလည်း တော်ရုံတန်ရုံ ၀ယ်မစားဖြစ်ပါဘူး။ မနက်ခင်း လက်ဖက်ရည်လေး တစ်ခွက်လောက် သောက်ရရင်ပဲ လောကစည်းစိမ်လို့ ခေါ်ရလေမလား။
လက်ဖက်ရည်ကတော့ ကျွန်တော့် အကြိုက်ပါပဲ။ သူမလည်း ကျွန်တော်နဲ့ ပေါင်းပြီး လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တတ်လာပါပြီ။ နုနုရည်(အင်းဝ)ရဲ့ ကုန်စိမ်းသည်တွေလို့ ဝေလီဝေလင်း နေမတက်ခင်မှာ စားတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ လက်ဖက်ရည် ချိုဆိမ့် ပြစ်ပြစ်ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်နဲ့ တူပါတယ်။ ဆိုင်မှာ သောက်ရင်တော့ ကျဆိမ့် သောက်ပါတယ်။ အိမ်မှာ မိန်းမဆိုလို့ အမေ တစ်ယောက်တည်း ရှိပြီး ကျန်တဲ့ ယောက်ျားတွေ အကုန်လုံးက လက်ဖက်ရည်သောက်လို့ အိမ်မှာပဲ အမေက နှပ်ပြီး ဖျော်ပေးပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရှမ်းတောင်တန်း လက်ဖက်ခြောက်ပါ။ နောက်မှ စိုးဝင်း လက်ဖက်ခြောက်တို့ ဘာတို့ ၀ယ်ဖြစ်တာပါ။ အခုတော့ လက်ဖက်ခြောက်က Lipton က Loose Tea ကို သုံးပါတယ်။ တစ်ထုပ်စီ ထုပ်ထားတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ စက္ကူ အထုပ်ကြီး တစ်ထုပ်ထဲမှာပါ။ အပြင်ကတော့ စက္ကူဗူးနဲ့ပေါ့။ နှစ်ယောက်စာဆို၊ စားပွဲတင်ဇွန်း
၃ဇွန်းမောက်မောက်ကို ရေ နှစ်ခွက်ခွဲလောက်နဲ့ နှပ်ထားပါတယ်။ ရေပွက်လာရင် မီးလျှော့ပြီး နှပ်ထားပါတယ်။ ရေဆူခါစမှာ ထွက်တဲ့ အနံ့က စိမ်းပါတယ်။ နောက်နည်းနည်း ကြာလာရင် အနံ့ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို အနံ့ပြောင်းသွားလည်း ခဏ ထားထားပါဦး။ လက်ဖက်ခြောက် မနပ်ရင် သောက်လို့ မကောင်းပါဘူး။ နှပ်တာ ကြာလို့ ကျသွားရင်တော့ ရေနွေး ပြန်ရောလို့ ရပါတယ်။ ဆားလေး လက်တစ်ဖျစ်လောက် ထည့်နှပ်ရင် ရပါတယ်။ အချိုလေးပြီး လေအရမ်း မချုပ်တော့ပါဘူး။ လက်ဖက်ခြောက်တွေကို စစ်လိုက်ပြီး သကြားနည်းနည်း၊ နို့ဆီများများ ထည့်ပြီး ဖျော်ပါတယ်။ အရမ်းခါးနေရင် ရေနွေးရောပါတယ်။ အရောင်ကို ကြည့်ရင် အရသာကို သိနိုင်ပါတယ်။ အုတ်ခဲရောင် ရင့်ရင့်ဆို ခါးပါတယ်။ နို့ဆီ များများထည့်လေ အရောင်ဖျော့လေပါ။ နို့စိမ်း ထည့်ချင် လည်းရပါတယ်။ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ လက်ဖက်ရည်ဆို နို့ဆီနဲ့ လိုက်ပြီး၊ ကော်ဖီဆိုရင် Creamer (Coffee-mate) နဲ့ ကြိုက်ပြီး နို့ပူပူကတော့ မိုင်လို ထည့်ဖျော်လို့ အကောင်းဆုံးပါ။
ဒီမှာလည်း လက်ဖက်ရည် တော်တော် သောက်ကြပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကို မျိုးစုံ သောက်ကြပါတယ်။ သူတို့ အခေါ်အဝေါ်တွေလည်း မှတ်ထားရပါသေးတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ မလေးတွေ ဖျော်တဲ့ တေးတာရက် (Teh Tarek)။ ရန်ကုန်မှာ ရှယ်တွေ မပေါ်ခင်တုန်းက ဖျော်သလို ခွက်ကြီးထဲ ထည့်ပြီး အပေါ်အောက် ဆွဲတာပါ။ Tarek ဆိုတာကလည်း မလေးလို ဆွဲတာပါ။ လက်ဖက်ရည် ကျကျကို နို့ဆီ၊ နို့စိမ်းနဲ့ ဖျော်ပြီး ဆွဲလိုက်ရင် အမြုတ်တွေနဲ့ နည်းနည်း ထလာပြီး သောက်လို့ ကောင်းပါတယ်။ စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောတဲ့ တေးတာရက်ပါ။ စကာင်္ပူ လော်ပါဆတ် (Lau Pa Sat) မှာ ညဖက် တေးတာရက် ရောင်းတဲ့သူကလည်း ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့ တွဲပြီး ဓါတ်ပုံ ရိုက်ထားတာကို အကြီးချဲ့ပြီး ဆိုင်မှာ ချိတ်ထားတယ်။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တေးတာရက် ကိုတော့ ကြိုက်တယ်။
ရန်ကုန်မှာ နောက်ပိုင်း ဖျော်နည်း တစ်မျိုးကတော့ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ဖျော်ပြီးမှ အိုးကြီးထဲ ထည့်ပြီး ပြန်နွှေးထားတာပါ။ နည်းနည်း ကြာတော့ အပေါ်မှာ မလိုင်တွေ တက်လာပါတယ်။ ဒါကိုပဲ ဆိုင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဇိမ်ခံသောက်ကြတာကို မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဆိုင်မှာတော့ အိပ်ငိုက်ပြေအောင် Green Tea ကို ရေနွေးနဲ့ သောက်ပါတယ်။ စတိုင်ပေါ့။ Green Tea သောက်တာ ဘာအတွက် ကောင်းတယ်၊ ညာအတွက် ကောင်းတယ်ဆိုပြီး သူမကလည်း လက်ဖက်ရည် အရမ်း သောက်တတ်လို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ သောက်ရင် အူက သံဓါတ် စုပ်တာ နည်းစေလို့ ပေးမသောက်ပါဘူး။
ရေးကောင်းကောင်းနဲ လက်ဖက်ရည် ဋီကာတောင် ဖြစ်တော့မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လက ခွင့်တစ်လ
ရတာနဲ့ မွေးရပ်မြေ ဇာတိကို ပြန်ဖြစ်တယ် ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လိုက်လံတွေ့ဆုံပြီး ခွင့်စေ့လို့ နေရပ်ပြန်တဲ့
အချိန် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်မှာ ကိုယ့်လိုပဲ လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တတ်သူနဲ့ ဆုံခဲ့ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော်
လူဝင်မှု့ကြီးကြပ်ရေးကို အဖြတ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရခြင်းပါပဲ ။ နောက်ဆုံးတန်းက တန်းစီနေတဲ့ ကျွန်တော်
အဖို့ ရှေ့က နောင်တော် ၊ အစ်မတော်တွေ အခွန်တော် ဆက်သနေ (အဲမှားလို့) ၊အရောင်စုံ ငွေ ကြေးတွေ
မသိမသာ(သိသိသာသာ) ထိုးအပ်နေကြတာ ကျွန်တော် နားမလည်နိုင် ။" ဘာလဲ ဒီလူတွေ မြန်မာပြည်ကို
ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ပြန်ဝင်လာကြသလဲ " နိုင်ငံတော်ကို အခွန်မထမ်းကြသူတွေပေါ့ ။ ကျွန်တော် ဒီလိုပဲ တွေး
ထင်ခဲ့တယ် ။ အခွန်ထမ်းထားတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ရင်ကော့ပြီး ဖြတ်လျှောက်ရုံပဲပေါ့ ။
“ ညီလေး ပတ်စပို့ ”
ကျွန်တော် ရိုရိုသေသေ ပေးလိုက်တဲ့ ပတ်စပို့စာအုပ်ကို ဟိုဒီလှန်ပြီး
“ ညီလေး လက်ဖက်ရည် တိုက်သွားဦး ”
ကျွန်တော့်လို လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တတ်သူနဲ့တွေ့တော့ ပျော်မဆုံးပေါ့ ၊ ဒါနဲ့ လေဆိပ်အဆင်း တက္ကစီသမား
ပြန်အမ်းတဲ့ ပိုက်ဆံထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ရွေးချယ်ပြီး ပိုက်ဆံ သုံးရာ ပေးလိုက်တယ် ။
ကျွန်တော့်ကို မျက်မှောင်ကြုတ် ကြည့်ပြီး (သူ့လို ကျွန်တော် မကြည့်တတ် )
“ ဒါပဲလားကွ ”
“ ဟုတ်ကဲ့ အစ်ကို လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် သုံးရာပါ ”
သူ့ရဲ့ “ ဘာကွ " ဆိုတဲ့ အော်သံ အဆုံးမှာ
“ မင်းမှတ်ထား …. မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်မှာ လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက် တစ်ထောင် ကွ ”
ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီ အိတ်ကပ်ထဲက တစ်ထောင်တန် တစ်ရွက်က သူ့အလိုလို ခုန်ဆင်းသွားတယ်။
လေယာဉ်ထွက်ခွါတော့မှာမို့ Aira Asia AK 1427 ထဲ ကျွန်တော် ၀င်ရောက်နေရာ ယူလိုက်တယ် ။
ဝေဟင်မှာ လေယာဉ်က ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ပျံဝဲနေဆဲ ကျွန်တော့် ခေါင်းထဲမှာ အနှီပုဂ္ဂိုလ်အတွက် အတွေး
စတွေက လိုက်ပါလာခဲ့တယ် ။ ကျွန်တော် လက်ဖက်ရည် ကြိုက်တာက တစ်နေ့ကို နှစ်ခွက်၊သုံးခွက်
ထက် ပိုနိုင်မည်ဟု မထင်ပါ ၊ ယခု ထိုပုဂ္ဂိုလ် လက်ဖက်ရည် ကြိုက်သည်က ……………………………
ကျွန်တော် Aira Asia လေယာဉ်ကြီးပေါ်မှ ခရီးသည်တွေကို လိုက်လံ ရေတွက်မိနေခဲ့တယ် ။ ဘယ်
ညာ နှစ်ဖက်ကို ခရီးသည် ၁၈၀ အပြည့် ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားက ၁၅၀ လောက်ပါ ပါတယ် ။ ၁၅၀ ဆိုရင်
လက်ဖက်ရည်ခွက် ၁၅၀ ။ ဒါ ကျွန်တော်တို့ လေယာဉ် တစ်စီးတည်း။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
အနေနဲ့ ဒီလူ တစ်နေ့ကို လက်ဖက်ရည် ခွက်ပေါင်းမည်မျှ ကုန်အောင် သောက်ပေမလဲ ။ တစ်ဆက်တည်း
လက်ဖက်ရည် အသောက်များတဲ့ ကျွန်တော် ဆီးချိုဆန်ဆန် ဖြစ်ချင်ပေမယ့် ၊ ဒီလူ ဒီလောက် ကျန်းမာ
ရေး ကောင်းနေထောက်တော့ ဒီလူ တစ်ယောက်တည်း သောက်တာမဟုတ်ပဲ share သဘော ခွဲဝေ
“ ကိုရေ ….. အိပ်ချင်ပြီကွာ ” ဆိုတဲ့ သူမရဲ့ အသံကြောင့် xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.5.2013 - wed
Flight AK 1427 အတွေ့အကြုံလေး မျှဝေရုံသက်သက်ပါ ။
Posted by mgyemin at 23:48 No comments:
သားကြီး။ မင်းနဲ့ ။ ငါနဲ့ ။ ပြီးတော့ ငါတို့ စိုက်ပျ...